जाडो मौसममा शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनका लागि खानै पर्ने ८ चिजहरु – Tungoon
जाडो मौसममा शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनका लागि खानै पर्ने ८ चिजहरु
काठमाडौं । पुस ९ गते
जाडो मौसममा शरीरको विषेश ख्याल राख्नु पर्छ । दिनभरको काम र चिसोले एकदमै थकित महसुस हसने गर्छ । शरीरमा उर्जाको अभावले दैनिक कार्यहरूमा प्रभाव पार्छ। तपाईँ कति मात्रामा खाना खानुहुन्छ यसको पुरै प्रभाव पूरै दिनको गतिविधिलाई असर गर्छ।
तयसैले जाडोमा खानपानमा ध्यान दिनु जरुली हुन्छ । खानपिनमा समावेश गरिएका केही चिजहरुले शरीरलाई तत्काल इनर्जी प्रदान गर्दछ । मौसम चिसो भएका बेला शरीरलाई न्यायो पार्न धेरै प्रकारका तातो परीकारहरु खाने गरिन्छ ।शरीरको हड्डीसहित रुघाखोकीबाट मुक्त हुन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि विशेष खानेकुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यो बेला स्वास्थ्यप्रद तरिकाले कस्तो प्रकारको प्राकृतिक खाद्यपदार्थ उपयोग गर्न सकिन्छ जानकारी लिनु अनिवार्य हुन्छ । जाडो मौसममा शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनका लागि खानै पर्ने कुराहरु निम्न प्रकार छन् ।
१. जाडोमा अण्डा खानु शरीरका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । अण्डालाई ऊर्जाको उत्तम स्रोत मानिन्छ। अण्डा प्रोटीन प्रशस्त पाइन्छ । जसले दिनभरि उर्जा प्रदान गर्छ । यसबाहेक, अण्डामा फेला परेको एमिनो एसिड ल्युसिनले शरीरमा अन्यले खानेकुराले भन्दा बढी उर्जा दान गर्दछ । अण्डामा पाइने भिटामिन बीले खानालाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न पनि काम गर्दछ। त्यस्तै केरा ऊर्जाको लागी सबैभन्दा राम्रो खाना मानिन्छ। केरा कार्ब्स, पोटेशियम र भिटामिन बी ६ को एक राम्रो स्रोत हो, यी सबै चीजहरूले शरीरमा उर्जाको स्तर बढाउँछन्।
२. कम मात्रामा नुनको प्रयोग गरी रिफाइन्ड, जैतुन वा तोरीको तेलमा खाना बनाएमा समेत यसले शरीरमा ताप बढाउने गर्दछ ।जाडोमा पसिना कम आएपनि पर्याप्त मात्रामा पानी एवं तरल पदार्थको सेवन गर्नुपर्छ । विशेषतः बालबालिका, गर्भवती महिला तथा प्रौढहरूले चिसो खाद्य पदार्थ वा आइसक्रिम खानु हुदैन । त्यस्तै स्याउमा कार्ब र फाइबर स्याउमा प्रशस्त पाइन्छ। एक मध्यम आकारको स्याउमा करिब १४ ग्राम कार्ब, १० ग्राम सुगर र २।१ ग्राम फाइबर हुन्छ।
३. यसमा फेला परेको प्राकृतिक चिनी र फाइबरले शरीरमा उर्जा बिस्तारै बढाउन काम गर्दछ । स्याउको सेवनले शरीर लामो समयसम्म सक्रिय रहन्छ। स्याउमा पनि राम्रो मात्रामा एन्टिअक्सिडन्ट हुन्छ जसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ।नियमित र दूध चकलेटभन्दा गाढा चकलेटमा कोको बढी पाइन्छ। कोकोमा पाइने एन्टिआक्सीडन्टले शरीरलाई धेरै फाइदाका साथ लाभान्वित गर्दछ रगत पनि बृद्धि गर्दछ । यसले मस्तिष्क र मांसपेशिको क्षमता वृद्धि गर्दछ। गाढा चकलेटले शारीरिक थकानका साथै मानसिक तन्दुरुस्ती पनि कायम राख्दछ ।
४. चुकन्दर शरीरमा उर्जा बढाउने खाद्यतत्वको रुपमा परिचित छ । एक अध्ययनका अनुसार चुकन्दरमा भएको एन्टिआक्सीडन्टले रगत प्रवाहलाई तीव्र बनाउँदछ।चुकन्दरमा पाइने नाइट्रेटले शरीरमा नाइट्रिक अक्साइड बढाउँदछ। यस कारणले गर्दा, यसको सेवनले अधिक अक्सिजन पाउँछन् र यसले शरीरमा उर्जाको स्तर बढ्छ। त्यस्तै स्वादिष्ट हुनुको अलावा, सखरखण्डले शरीरमा उर्जा बढाउन पनि काम गर्दछ। एक कप सखरखण्डमा २५ ग्राम काब्र्स, ३.१ ग्राम फाइबर, २५ प्रतिशत मैंगनीज र भिटामिन ए प्रशस्त पाइन्छ । मीठा आलुमा भएको फाइबर र कार्बले पचाउन समय लिन्छ त्यसैले शरीर खाए पछि यो लामो समयसम्म सक्रिय रहन्छ।
५. शरीरलाई तातो बनाइराख्न आलस र तिलको सेवन प्रभावकारी मानिन्छ । आलसलाई भुटेर पाउडर बनाई बिहानबेलुका खाने तथा तिललाई दैनिक भोजनमा सामेल गरेमा चिसोबाट बच्न सकिन्छ । त्यस्तै काजु, पिस्ता र बदाममा रहेको तैलीय गुणले शरीरलाई तातो बनाइराख्छ । अरू सामान्य अवस्थामा भन्दा जाडो सुरु भएपछि काजु, पिस्ता र बदाम बढी खान सकिन्छ ।
६. दलिया अन्न हो जसले तपाइँलाई दिगो ऊर्जा दिन्छ । यसमा बीटा ग्लुकन भन्ने घुलनशील फाइबर हुन्छ जसले पानीसँग मिसाउँछ र शरीरमा बाक्लो जेल बनाउँछ। पाचन प्रणालीमा यो जेलको कारण चाडैँ भोक लाग्दैन । दलिया भिटामिन र खनिजहरूले भरिएको हुन्छ जसले शरीरमा उर्जा बढाउँदछ। त्यस्तै अधिकांश व्यक्ति थकान कम गर्न र मुड फ्रेस गर्न कफी पिउँछन्। कफिले तत्काल ऊर्जा प्रदान गर्दछ। कफीमा पाइने क्याफिनले स्नायु प्रणाली शान्त गर्दछ। कफी पिउँदा शरीरको एपिनेफ्रिन हार्मोन हुन्छ जसले शरीर र दिमागलाई सक्रिय गर्दछ। कफी पिउँदा अल्छीपन तुरुन्त हट्छ । यद्यपि अत्यधिक कफि सेवनले शरीरलाई हानी गर्दछ।
७. ब्राउन राइसमा पोषक तत्वहरू समृद्ध हुन्छन्। सेतो चामलको तुलनामा, यो कम प्रशोधित हुन्छ । यसमा फाइबर, भिटामिन र खनिजहरू अधिक पाइन्छन्। आधा कप ब्राउन राइसमा २ ग्राम फाइबर र राम्रो मात्रामा मैंगनीज हुन्छ, यसले कार्बोहाइड्रेट र प्रोटीनलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ। रगत चिनी पनि खैरो चामलबाट नियन्त्रण गरिन्छ।त्यस्तै स्ट्रबेरी राम्रो र ऊर्जा बृद्धि फल मानिन्छ। स्ट्रबेरी खाएर, शरीर कार्ब, फाइबर र चिनी पाउँदछ जसले तपाईंको ऊर्जाको स्तर बढाउन सक्छ। एक कप स्ट्रबेरीमा १३ ग्राम कार्ब, ३ ग्राम फाइबर र भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । स्ट्रबेरी खाँदा थकान कम हुन्छ। यसले शरीरको सूजनलाई पनि कम गर्दछ।
८. सामान्यतया मसलाका रूपमा प्रयोग गरिने अदुवा र बेसार जाडो समयमा शरीरलाई तातो बनाइराख्न अत्यन्तै गुणकारी मानिन्छ । त्यस्तै यदि तपाई मांसाहारी हुनुहुन्छ भने जाडोमा कुखुराको सुप बनाएर पिउनाले निकै लाभ मिल्छ । कुखुराको मासुले शरीरलाई तातो दिने काम गर्छ । यसले रुघाखोकी समेत निको पार्छ ।जाडोमा भात खानु उपयुक्त मानिदैन, यसले शरीरलाई चिस्याउने काम गर्छ । जाडोमा खाने सबैभन्दा राम्रो अन्न जौ, गहुँ र फापर हो । यि अन्नले शरीरमा तातोपना बनाइ राख्ने गर्दछन् ।चिसो भगाउन लसुनलाई निकै राम्रो मानिन्छ । साथै यसले कुनैपनि रोगको संक्रमण हुनबाट बचाउछ । लसुनको सेनव गर्दा भाइरससंग लड्न समेत मद्दत गर्छ । चिसो मौसममा रुघा, खोकी र ज्वरोसंग लड्नका लागि मरिच निकै प्रभावकारी मानिन्छ । मरीचमा पनि कालो मरीचले शरीरमा तातो